Iimpawu zokubukisa nge-acids: iimfihlelo zokukhetha nokusebenzisa
I-Acids ekwakheni ukhilimu okanye i-tonic-kutheni oku kuyimfuneko kwaye akuyona yingozi? I-Dermatologists iqinisekisa: "i-asidi" izimonyo - uncedo oluyimfuneko ekuxazululeni iingxaki zesikhumba. Iimveliso ezikhethiweyo ezichanekileyo ziya kunceda ukuphucula i-turgor ye-epidermis, ikhuphe ukukhupha kunye nokuphelisa ukungapheleli.
Kuthetha nge-AHA-acids ngokugqibeleleyo ukuphelisa ukungapheli kwesikhumba esingaphezulu, okusisichukumisa ngakumbi emva kokubanda kwebusika. I-Alpha hydroxy acids ngokugqithiseleyo igxotha isikhumba seeseli ezifile, kubuyisela imbonakalo emitsha, kubuyisela i-elasticity, ukulwa nempawu zokubumba, imibimbi emincinci, ukuguqula imibala kunye nemiqondiso yokuvuvukala. Iimpawu ezidumileyo ze-cosmetic acids zi-glycolic, i-lactic, i-malic ne-almmond: zonke ziyi-exfoliants ezinika umphumo ophezulu. Xa ukhetha imveliso yokunyamekela, khetha u-5 ukuya ku-8 ekhulwini we-AHA kwi-formula.
Uchungechunge lweCosmetic kunye neVNA-acids lenzelwe ukukrazula i-acne kunye ne-acne yee-degrees ezahlukeneyo. I-Beta-hydroxy acid, i-soluble inamanqatha, isebenza kwiindawo ezinzulu zedermisi, ihlambulule i-pores evela kwi-sebum kunye ne-contaminants. Isiphumo siyamkholisa kakhulu: ukungabikho kwamachashazi amnyama, ukunciphisa ama-pores, ukunciphisa ukukhanya kwelanga. Iimveliso kunye nepesenti ezimbini okanye iipesenti ze-salicylic acid kunye nezithako zokulwa ne-antibacterial zikhethiweyo ezifanelekileyo zesikhumba sengxube.
Abalawuli abane-PHA-acids - ukufumana abafazi abanesikhumba esibuhlungu. Bakwazi ukujamelana neengxaki ezinjenge-AHA ne-VNA, kodwa azibanga iimpembelelo kunye nokucasula. I-polyhydroxy acid eyaziwayo kakhulu yi-gluconic: ayinakuchukumisi imiphumo emibi yimizila ye-ultraviolet kwaye ivuselela ukuhlanganiswa kwe-elastin, exhasa ulutsha.
Indlela yokulondoloza ubuhle bemvelo kwisigqi sesixeko esikhulu
Ukunyuka kweenwele ezintle - ukugubha kwi-salon enobuhle
Indima ye-hyaluronic acid kwizonyiso
Ezi zinto zingabi ncinane zindinceda ndikhangele umncinci
5 izimfihlo zobuhle uAnastasia Zavorotnyuk: le migaqo iya kuqatshelwa
Ukusetyenziswa kobumba oluhlaza kwi-cosmetology
Qinisa kwaye ukhanyise: iinwele zifake isinamoni
Iyeza zamasiko, indlela yokuphatha i-angina
Indlela umbala wegumbi lokulala ochaphazela ngayo ubomi bobulili lwabalingani
UMilan noAlexander Kerzhakov bafudumala amaqhekeza omtshato
Iresiphi yesonka sebhanana kunye namantongomane
Umbala omhlophe kwiingubo
Iimbambo zeengulube zebhasi
IMvana kunye nemifuno e-tazhin
Othandekayo uThimothewu wagxekwa ngomlomo we-silicone, ifoto
Unjani umbala wamehlo kubantu?
Iibisiki zehayiti, zixhomekeke
Impilo Yomntwana kunye neNkcazo eFanayo
Umfazi owayengumfazi waseTimati u-Alena Shishkova wakhupha ngokukhawuleza amabele akhe
Imimandla engendawo kunye nokuhlaziywa kohlobo lomntu kubo
Iintlanzi, iinyembezi, ukuxhalaza kuthintela umntwana ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokwenza ulwalamano olungcono kunye nomthandayo
Kutheni asikwazi ukuba sibuze
Ukuvuselela iSerum ebusweni